Global Voices teny Malagasy » Tonga Saina amin’ny Tokony Hifehezany ny Fitomboan’ny Mponiny ireo Firenena Afrikàna · Global Voices teny Malagasy » Print
Tonga Saina amin'ny Tokony Hifehezany ny Fitomboan'ny Mponiny ireo Firenena Afrikàna
Voadika ny 26 Avrily 2018 18:48 GMT 1	 · Mpanoratra Abdoulaye Bah Nandika miora
Sokajy: Afrika Mainty, Fahasalamàna, Fanabeazana, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Politika, Tanora, Vehivavy sy Miralenta
Sarintanin'izao tontolo izao araka ny tahan'ny fiterahana. Araka ny World FactBook (CIA), vinavina ho an'ny taona 2015.
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Ôktôbra 2017)
Noho ny fihenan'ny tahan'ny fahafatesan'ny zaza miaraka amin'ny fitomboan'ny taham-pahavelomana eo am-pahaterahana, nahatratra hafainganana tsy voafehy ho an'ny fivelomana eto amin'ny planeta tany ny tahan'ny fitomboan'ny olona. Na izany aza, miovaova be araka ny tanibe io taha io: Eny tokoa, raha lasa tsy ampy hiantohana ny fahaveloman'ny karazana ny tahan'ny fitomboan'ny ponina any amin'ireo firenena manana fidiram-bola ambony, samy hafa tanteraka amin'izay no miseho any amin'ireo firenena mahantra indrindra. Manana voka-dratsy eo amin'ny fiveloman'ny taranaka ho avy, ny fivoaran'ny karazan-javaboary hafa sy ny tontolo iainana ny fikorontanan'ny fitomboan'ny mponina.
Mampahatsiahy i Denis Garnier, Filohan'ny Fikambanana Demôgrafia Mandray Andraikitra fa hiala amin'izao 1,2 izao ka hahatratra 4,2 lavitrisa ny Afrikàna amin'ny taona 2100. Araka ny voalazan'io manampahaizana io, ho maro isa nòho ny isan'ny olona teto amin'ny planeta iray manontolo tamin'ny 40 taona lasa izay i Afrika.
Izao no nambaran’ i Denis Garnier raha namaly ny breizh-info.com, vohikala anglisy mirakitra solom-baovao, izay nanontany raha misy tanibe iray manokana mampanahy azy ny demôgrafiany: 
… ho an'i Afrika, ambony loatra foana ny tahan'ny fahaterahana, miaraka amin'ny salanisan'ny zanaka eo anelanelan'ny 5 hatramin'ny 6 isa-behivavy ao Afrika Atsimon'i Saharà (ankoatra ny faritr'i Afrika Atsimo), ary indrindra ny tendro mihoatra ny 7 ao Nizera sy Tchad. Maro amin'ireo firenena ireo no mampiasa ny teny Frantsay (ireo tanàna roa miampy ny RD Kôngô, Malì, Burkina Faso, Bénin, Tôgô, Madagasikara, …) ary mety ho hafahafa loatra ny tsy firaharahian'ny firenenay firy ilay olana. Ankoatra ny fitiavana mampitombo taranaka nasongadina etsy ambony, toa mihevitra ny mpitondranay fa tsara kokoa ny tsy manafintohina ireo mpiara-miasa ara-toekarena sy ara-kolontsaina… Hita anefa fa vonona hihetsika izy ireo matetika, araka ny asehon'ireo fanambaràna sasantsasany. Tonga eto amin'ity fifanoherana manaraka ity isika: ireo fikambanana Amerikàna tsy miankina no matetika mampiroborobo ny fanaovana fanabeazana aizana.
Hatry ny ela, noho ny antony ara-pinoana, ara-tantara, ara-pomba na noho ny tsy fahampian'ny fampahalalam-baovao fotsiny, na ny fampiasàna ny fomba fiteny toy ny “fanabeazana aizana”, “famerana ny isan-jaza” ary “fandrindràna ny fiainam-pianakaviana” aza dia mampiahiahy any amin'ireo firenena Afrikàna, indrindra ireo mampiasa ny teny Frantsay.
Tahan'ny fahaterahana isam-paritra nanomboka tamin'ny 1950 hatramin'ny 2050 avy amin'ny UN World Population Prospects.
Tamin'ny taona 2010, nampahafantatra  ireo sakantsakana samy hafa natrehan'ireo mpiasan'ny fahasalamana tamin'ny fampidirana ny fomba fandrindrana ny fiainam-pianakaviana i Brice Dossou-Gouin:
Tsy mbola mety amin'ny tontolo iainana ara-pianakaviana sy ny zavamisy ara-piarahamonina sy ara-kolontsaina ao Afrika, fa indrindra ao Bénin, ny fametrahana ny fandrindràna fiainam-pianakaviana ao anaty tokantrano noho ny tsindry ara-kolontsaina sy ny finoana samy hafa. Lavitry ny tena zavamisy ny dingana mavitrika ataony. Manome tombontsoa maro sy voka-dratsy ho an'ny mpivady izany.
Saingy tao anatin'ny taona vitsy, manomboka miova ny toetsain'ireo manampahefana. Tsy ny fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana ihany, indrindra ny Amerikana, no mikasa ny hampitsahatra ny fipoahana demôgrafika. Saingy misy fahasamihafàna.
Manao fanamarihana  ny Profesora Michel Garenne raha namarana antontan-taratasy iray momba ny pôlitika fampitahàna ireo firenena Afrikana maro, mitondra ny lohateny hoe Fandrindràna ny fiainam-pianakaviana sy ny fiterahana ao Afrika – Fivoarana nanomboka tamin'ny 1950 ka hatramin'ny 2010. FERDI 2017:
Tsikaritsika araka izany, ao Afrika Atsimon'i Saharà, ireo toejavatra isan-karazany marobe mikasika ny pôlitika momba ny mponina, ny fandaharanasa momba ny fandrindràna ny fiainam-pianakaviana ary ny fifehezana ny fiterahana, izay mitaratra ny fahasamihafàna ara-potokevitra, ara-pôlitika, ara-toekarena, ara-piarahamonina, eny hatramin'ireo toejavatra isan-karazany momba ny valan'aretina: miainga avy aminà taham-piterahana ambonimbony kokoa nòho ny hafa ny firenena sasany, izay manana olana bebe kokoa hovahàna anatin'ny fotoana maharitra kokoa noho izany.
Tamin'ny volana jolay lasa teo, nivory niaraka tamin'ireo mpiara-miasa aminy avy ao Maoritania sy Tchad ny parlemantera avy amin'ireo firenena mpikambana ao amin'ny CEDEAO, teo anoloan'ny fahitàna fa amin'ny fiavian'ny taona 2050, ny mponin'ny tanibe Afrikàna irery ihany no hitombo avo roa heny. Nivoady araka izany izy ireo ny hiasa mba hampiakatra 5% isan-taona fara-fahakeliny ny tetibola natokana ho an'ny fampiharana ny fandrindràna fiainam-pianakaviana ao amin'ny firenena hahatrarana ny tanjon'ny zaza 3 isa-behivavy fara-fahabetsany, hatramin'ny 2030, araka ny ampahatsiahivin ‘ireo mpianadraharaha ao amin'i Benin 24, i Ismène KPEDJO sy i Fabienne SANON.
Firenena Afrikàna maromaro no nankalaza ny Andro iraisam-pirenena ho an'ny fanabeazana aizana tamin'ny alàlan'ny lanonana ôfisialy ny 26 Septambra. Mitatitra i Narcisse Yao fa ny 26 hatramin'ny 28 Septambra, ho maimaimpoana ny fizaham-pahasalamana momba ny fanabeazana aizana ao Côte d'Ivoire, noho ireo toeram-pitsaboana mandehandeha an'ny Fikambanana Ivoariana ho an'ny firindràn'ny fiainam-pianakaviana (AIBEF). Nampiany  hoe:
Ampahafantarina ny vahoaka ny karazanà fomba fanabeazana aizana mba hamerana ny isan'ny vohoka tsy niriana. Avela hanao izay fomba fanabeazana tiany ny mpivady.
Izany no tanjon'ny fankalazàna ôfisialy ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny fanabeazana aizana, izay voalohany tao Côte d'Ivoire. Tamin'ny 26 Septambra tao amin'ny trano filanonana Figayo ao Abidjan-Yopougon izany, teo ambanin'ny lohahevitra: “Ny fanokanam-bola ho an'ny fanabeazana aizana, dia fiantohana ny hoavy”…
Araka ireo tarehimarika nomen'ny Mpiandraikitra ny Fandrindràna ny Fandaharanasam-pirenena ho an'ny fahasalaman'ny fananahana sy ny fandrindràna ny fiainam-pianakaviana, ny tahan'ny fanaovana fanabeazana aizana ankehitriny dia 14% raha tombanana ho 27% kosa ny filàna tsy feno. Raha ny amin'ny fahafatesan'ny reny eo am-piterahana kosa, tombanana ho 614 isaky ny zaza 100.000 teraka velona.
Miampanga  ireo hevitra sasantsasany voaray ny tranonkala afrosantelgbt.org an'ny Fikambanana Afrique Avenir, izay mamaritra ny tenany ho “sehatra fampahalalam-baovao sy loharanom-baovao ho an'ireo mpikatroka mafana fo ho an'ny fiarovana mifantoka amin'ny vahoaka Afrikana-Karaibiana LGBT”:
Fahadiovana. Ny fanadiovana ny atin'ny fivaviana aorian'ny firaisana ara-nofo dia tsy mahasolo ny fitaovana fanabeazana aizana.
Tsy miaro amin'ny aretina azo avy amin'ny firaisana ara-nofo ny pilina. Mandaitra hisorohana ny vohoka tsy iriana ireo fomba samy hafa fanabeazana aizana an-kamehana, fa tsy miaro amin'ireo IST (aretina azo avy amin'ny firaisana ara-nofo). Ny fimailo ho an'ny lahy na ho an'ny vavy irery ihany no miaro amin'ny vohoka tsy iriana sy ny IST
Tsy mahatonga ny vehivavy iray ho momba ny pilina. Tsy mampitombo ny mety hisian'ny aretina ny fihinanana azy mandritra ny taona maro.
Tsy mahomby ilay fialàn'ny lehilahy alohan'ny hahatongavan'ny tsirinainy…
Mety ho bevohoka amin'ny fotoana rehetra ny vehivavy na mandritra ny fadimbolana aza. Toy izany koa ny amin'ny firaisana ara-nofo voalohany…
Tsy miteraka ratra ilay fitaovana asisika amin'ny vozon'ny tranon-jaza iny fa mety hanamora ny fitomboan'ny mikraoba hatrany amin'ny làlan'ny atodinaina. Izany no tsy hampirisihina ireo vehivavy mora ifindran'ny aretina sy miray amin'olona maro hampiasa azy io.
Any Borondia izay mahatratra 34,7% ny fampiasàna ny fomba fanabeazana aizana manaraka ny toetr'andro, mitatitra  ny toedraharaha momba ny fandrindràna ny fiainam-pianakaviana i Clarisse Shaka:
Araka ny filazan'ny Dr Juma Ndereye, Talen'ny PNSR, nametraka tanjona hahazo taham-piterahana zaza 3 isa-behivavy ny governemanta amin'ny taona 2025. Ankehitriny, ankizy 6 isa-behivavy io taha io. Mba hahatrarana izany dia tokony ho 60% amin'ireo vehivavy mampiasa fomba fanabeazana aizana ny tahan'ny fihenan'ny fiterahana, araka ny voalazan'ireo manampahaizana momba ny demôgrafia.
Ankehitriny, 37,4%-n'ny mponina no mampiasa ny fomba fanabeazana aizana manaraka ny toetr'andro, araka ny voalazan'ny Dr. Juma Ndereye. Ho azy, tsy mbola mahafa-po io taha io. Nefa, tombanany ho tena lehibe ny dingana vita. «Tena vitsy ny firenena hanao izay vitan'i Borondia tao anatin'ny 15 taona.» Tamin'ny taona 2000, hoy izy manohy, 2,7% ny tahan'ny fomba fanabeazana aizana manaraka ny toetr'andro. «Tena fandrosoana goavana izany.»
Nanandrana nijery ifotony  ny fampahalalana sy ny fampiharana ny fanabeazana aizana any Ginea ireo mpampiasa aterineto, Balla Y. sy Sanso Barry, ao amin'ny tranonkala ledjely.com:
Mankalaza ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fanabeazana aizana izao tontolo izao ny 26 Septambra. Noho izany, miezaka mijery ifotony ny mpanoratra avy ato aminay amin'ny fotoana izay andraisana ny tombontsoa demôgrafika ho lohalaharan'ny tanibe afrikàna amin'ny ankapobeny. Eny tokoa, singa fototra ilaina amin'ny fakàna ny tombontsoa demôgrafika ny fifehezana ny fiterahana sy ny fitsaboana manara-penitra. Ary mikasika io sehatra io, mbola lavitra ny làlan'i Ginea, satria raha araka ilay Fanadihadiana ara-demôgrafia sy ara-pahasalamana natao farany (EDS-2012), manodidina ny 6 % amin'ireo, ho an'ireo vehivavy 15-19 taona, ka hatramin'ny 14%, ho an'ireo 20-24 taona, ny tahan'ny fanaovana fanabeazana aizana na dia mahafantatra fara-faharatsiny iray amin'ireo fomba fanabeazana aizana aza ny 91%-n'ny vehivavy manambady sy ny 97%-n'ireo vehivavy tsy manambady fa manao firaisana ara-nofo matetika. Vokatry ny antony maromaro, misy fiantraikany eo amin'ny tondro ara-piarahamonina sy ara-pahasalamana mifandraika amin'ny mponina amin'ny ankapobeny sy ny tanora indrindra indrindra io taha ambany amin'ny fampiasàna fomba fanabeazana aizana io.
Nivondrona ao amin'ny Fiarahamiasan'i Oagadogoa ny firenena valo ao Afrika Andrefana sy Afovoany nanomboka tamin'ny 2011, dia i: Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ginea, Malì, Maoritania, Nizera, Senegaly ary i Tôgô.
Efa nanomboka nampiadana ny fitomboan'ny mponiny ireo firenena afrikàna mahomby indrindra eo amin'ny fandrindràna ny fiainam-pianakaviana. Araka ny voalazan'ny Banky Iraisam-pirenena dia i: Ganà, Kenya, Namibia, Roandà, Sodana, ary i Zimbaboe izany,  lasa 2,3 raha 3,2 teo aloha.
Nahatratra ny fetra fara-tampony kosa ireto firenena afrikàna manan-karena indrindra ireto, izay tsy ahafahan'ny fitomboan'ny mponina voajanahary miantoka ny fitazonana ny isa amin'izao fotoana intsony raha tsy misy fifindra-monina: Bôtsoanà, Maorisy, Repoblikan'i Afrika Atsimo, ary i Soazilandy.
Raha hamaky momba io lohahevitra io ihany: maneho ny heviny tamin'ny ny fanamarihan'i Emmanuel Macron momba ny famerana ny isan-jaza ateraka ao Afrika ireo Afrikàna mpampiasa aterineto 
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/04/26/108053/
 Izao no nambaran’: https://www.breizh-info.com/2015/06/02/27127/denis-garnier-il-faut-stabiliser-au-plus-vite-la-population-mondiale#disqus_thread
 Manao fanamarihana: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01578080/document
 Nanandrana nijery ifotony: http://www.ledjely.com/2017/09/26/contraception-letat-des-lieux-en-guinee/
 maneho ny heviny tamin'ny ny fanamarihan'i Emmanuel Macron momba ny famerana ny isan-jaza ateraka ao Afrika ireo Afrikàna mpampiasa aterineto: https://fr.globalvoices.org/2017/07/17/213006/